ကွန်ပျုတာတစ်လုံးကို ကိုယ် တိုင် တပ်ဆင်နိင်ရန်.... - Zomi Computer and Internet Association
Home / HARDWARE / PC / ကွန်ပျုတာတစ်လုံးကို ကိုယ် တိုင် တပ်ဆင်နိင်ရန်....
ကွန်ပျုတာတစ်လုံးကို ကိုယ် တိုင် တပ်ဆင်နိင်ရန်....
Taang Sianpu January 08, 2011 HARDWARE, PC
ကွန်ပျူတာတစ် လုံးကို စ တင် တပ် ဆင် တော့ မယ် ဆိုလျှင် ပထမဆုံး ပါ ၀င် တဲ့ အရာတွေကို သိရှိ ထားရပါ မယ်...ဘယ် ကွန် ပျူတာဘယ် လောက် Model ပဲ ဖြစ်ပါစေ ပါ ၀င် တဲ့ အရာ တွေက တူတုပါ ပဲ .ကွန် ပျူတာတစ် လုံး အလုပ်လုပ် ဖို့ အတွက်Main (ရ)မျိုးပဲ ရှိပါ တယ်...
၅။ Video card (VGA)
၇။ CD ROM တို့ ပါ ပဲ။
၁။ စတင် ပြီး ကွန် ပျူတာ တစ် လုံးကို စတင် တပ် ဆင် တော့ မယ် ဆို ရင် Motherboard ကို စတင် ရွေးချယ် ရပါလိမ့် မယ်. အဲ့ ဒီ မှာ ကို တပ် ဆင် မဲ့ ပုံးရဲ့ အရွယ်အစားပေါ်မူတည် ပြီးရွေးချယ်ရပါ မယ် ဒါမှ မဟုတ် ကို တပ်ဆင် မဲ့ Boardရဲ့အရွယ်အစားပေါ်မုတည်ပြီးရွေးလည်းရပါတယိMotherboard အရွယ် (၂)မျိုးရှိပါတယ်..MATX နဲ့ ATX ပါ ATX က Board size အကြီးဖြစ်ပြီးMATX ကတော့ Board အသေးပါ...mother boradမှာ socket အမျိူး အစားအများပြားရှိပါတယ် Socket (478)..
Socket(775)..Socket(1366)..နှဲ့Socket (1156) ဆိုပြီးအများအပြားရှိ ပါ တယ် လုအသုံးအများဆုံးက Socket (478)နဲ့ Socket(775)ပါ Socket (****) ဆို တာ ကို တပ် ဆင် မဲ့ Processor Pin အေ၇အတွက် ပါ board ရဲ့ Processor ထည့် တဲ့ ခွက်လေးထဲ မှာ ပါ ပါတယ်ေ၇ ကြည့် လို့ တော့ ရ တယ် အရမ်းတော့ မကိုင် နဲ့ ကြိုးတတ် တယ်.. အဲဒီ Pinလေးတွေမကြိုးအောင် ဂရုစိုက် တပ် ပါ
၀ယ်ယူလာတဲ့ Board ကို ကေစင် မှာ တပ်ဆင်ပါ ..အော်ပုံးနောက်က သံပြားလေးကို လည်းတပ် ဖို့ မေ့ မနေ ပါနဲ့ ဦးမယ်..အခုMotherboard တပ် ဆင်ပြီးရင် တော့
၂ ။ Motherboard စာ အုပ်လေးဖတ် ဖို့ လိုအပ် ပါ တယ်.. ကို တပ် ဆင်မဲ့ board က ဘယ် လို Processor ကိုလက် ခံသလည်းဆိုတာကိုသိရပါမယ်..ဥပမာ ကိုယ်ဝယ်ယူလာတဲ့ board က Socket 775 ဆိုပါစို့ ..အဲ့ ဒီ အမျိုးစားနဲ့ ကိုက် ညီ မဲ့ Processorကို ရှာဖွေပြီးဝယ်ပါ ..Socket (775) မှာ မှ ကို လိုချင်တာ ကို ရွေးပါ Pentium4လားCore2duo လား ဆိုတာ ကို ရွေးချယ် ပါေ၇ွးပြီးပြီဆိုရင်တော့ Motherboard မှာ တပ် ဆင် ပါ တပ် ဆင် ရာ မှာသတိတော့ ထားပါ boardအောက်မှာပါ တဲ့ Processor ခံ Pin လေးတွေက န လို့ ပါ..တပ် ဆင် ရာမှာProcessor ပေါ်မှာလေးထောင့် အမည်းကွက် လေးပါ ပါတယ် အဲ့ ဒါကို လက်ယာဘက် မှာထားပြီးအံ
၀င်ပြီးဆိုမှ ကလစ်ကိုဖိချပါ.. အဲ အသေးစိတ် ကို လည်းMotherboard စာအုပ် မှာ ရှင်းပြ ထားပါ တယ်..ပြီရင် တော့ Processor Fan
တပ် ပါFan ၀ယ်ရာ မှာ လည်းကိုယ် ၀ယ် တဲ့ Porocessor ပေါ်မူတည် ပြီးဝယ် ပါ Socket 775 ဆိုရင် socket 775 အတွက် Fanကို ၀ယ် ပါအလုပ် ရှပ် မခံ ချင် ဘူးဆိုရင် မုလီနဲ့ ဟာ ၀ယ် တပ် ပါ ..မုလီ နဲ့ ဆိုရင်တော့ board ကို အပြင် မှာ အ၇င် ဆုံးFan နဲ့  Processor တပ်တာ အကောင်းဆုံးပါ ပဲ ...Fan power ကြိုးကိုboard မှာ တပ် ဆင် ပါ board မျက်နာပြင်မှာ (CPU FAN) ဆိုပြီးရေးထားပါတယ်..အဲ့ဒီ ပင်လေးမှာ စွပ် ပါ
၃။ RAM တပ် ဖို့ ပါ .. Processor ကော Fanေ၇ာတပ် ပြီးပြီးဆိုရင်RAM ချောင်းတပ် ဖို့ လိုပါ တယ် .. သူ လည်းProcessor နည်းတုအရေးပါ တဲ့ အရာတစ် ခုပါ ..အမြန် နုန်းကို မြှင့် တင် ပေးဖို့ ပါ RAM မှာ လည်းProcessor နည်းတူ အမျိုးအစားတွေရှိပါတယ်
(DDR,DDR2,DDR3) ဆိုပြီ ရှိပါ တယ် ဒါ့ အပြင် (400Mhz,667Mhz,800Mhz ,1066Mhz ) ဆိုပြီ ရှိ ပါတယ် Motherboard ရဲ့ လက်ခံ တဲ့ ပမာဏ ပေါ်မူတည် ပြီးရွေးချယ် ပါ .. များသောအားဖြင့် DDRနဲ့ DDR2 ကို သုံးကျ ပါ တယ် (400,667,800Mhz ) တွေအသုံးများပါ တယ် RAM ချောင်းတပ် မယ် ဆိုရင် Board မှာ RAM ချောင်းတပ် ဆင်ရန် မြောင်းရှည်လေးနစ် ချောင်း(Or) လေးချောင်းပါဝင်ပါတယ် အဲ့ ဒီ မှာ တပ် ဆင်ပါ တပ် ဆင် ရာ မှာRAM ချောင်းရဲ့ Center မှာ မြောင်းလေးပါ ပါ တယ် အဲ့ ဒါ ကို Boardက မြောင်းလေးနဲ့ အံဝင်ခွင် ကြ အောင် တပ် ဆင် ပါ...
၄။ လေးအချက်နေ နဲ့ အားလုံးတပ် ဆင်လို့ ပြီးပြီးဆိုလျှင်Video card (VGA) တပ် ဆင် ရပါ မယ်.. VGA မှာ နစ်မျိုးရှိ ပါ တယ်(AGP /PCIE)ဆိုပြီးရှိ ပါ တယ် (AGP ) က တော့ အရင် တုံးက စက် တွေမှာသုံးပါတယ် (PCIE)က တော့ ခုနောက်ပိုင်း board တွေမှာ သုံးပါတယ် boardရဲ့ လက် ခံ တဲ့ ပေါ် မုတည် ပြီးဝယ် ပါ (PCIE )ပဲ အများဆုံးနေ ပါလိမ့် မယ် (AGP) တော့ ရှားသွားပြီ ဗျ ပျက်ရင် တောင် ရှာဖို့ ခက် တယ် .. တပ် မယ် ဆိုရင် တော့ Processor ရဲ့ အောက် တည့် တည့် မှာ VGA ထည့် ဖို့ မြောင်းလေးပါ ပါ တယ် အဲ့ ဒီ မှာ အံဝင်အောင်တပ် ဆင် ပါ
၅။ အားလုံးတပ် ဆင်းပြီးရင် Board တစ် ခုလုံးအလုပ် လုပ် ရန် တအတွက် Power ပေးဖို့ ပါ ဒါ က တော့ တပ် ဆင် ခြင်းရဲ့ အဓိက ပါ ပဲ Power Supply ရွေးချယ်ရာ မှာ HDD ပေါ်မူတည် ပြီးရွေးချယ် ပါ .. HDD -500GB လောက် ဆို ရင် တော့ 450 Wလောက် မှ အဆင် ပြေ ပါ တယ် ပါဝါ မမျှ ရင် board လောင် တတ် ပါ တယ် Power Supply မှာ ကြိုးတွေ အများကြီး ပါ ပါ တယ် board ကို ပေး မဲ့ ပါဝါ ကြိုးက ခေါင်း အဖြု(၂၄ ပင်) ပါ တဲ့ အကြီးခေါင်းရယ်.. (၄ပင်) ပါ တဲ့ အဖြူ ခေါင်းသေးရယ်နစ် မျိူးရှိပါတယ်..(၄ပင်)ပါတဲ့ ခေါင်းလေးက တော့ Processor Fan ရဲ့ ဘယ် ဘက် မှာ ခုံ လေးပါ ပါ တယ် အဲ့ ဒီ မှာ တပ် ပါ.. ခေါင်းအကြီးကို တော့ RAMရဲ့ အောက် နားမှာ ၂၄ပင် အပေါက်လေးပါ ပါ တယ် အဲ့ ဒီ မှာစွပ် ပါ အဲ့ င်္ဒီ မှာ Board ကို ပါ ၀ါ ပေးပြီးပါပြီ နောက် ဆုံးနေနဲ့ board ကို control ပေးဖို့ ကြိုးများကိုတပ် ဆင်ရ ပါ မယ်.. control ပေးတဲ့ ကြိုးတွေက တော့ ပုံး အောက် မှာ ပါ ပါ တယ် ... အဲ့ င်္ဒီ ကြိုးတွေကို Front panel wires များလို့ ခေါ်ပါ တယ် အဲ့ ဒီ wire လေးတွေက အဓိက အကျ ဆုံးပါ ...boardကြီတစ် ခုလုံးအလုပ်လုပ်တဲ့ နေ ရာမှာ ... တပ် ဆင် ပုံ ကတော့ motherboard ရဲ့ ညာ ဘက်ထောင့် အောက် အစွန်းလေးနားမှာ ရှိ ပါ တယ် အဲ့ ဒီ ကြိုးလေးတွေကို စိုက် ဖို့ ပါ ... Front panel လို့ ရေးထားပါ တယ် ..board ပေါ်မှာ..ကြိုးတွေက တော့ Main switch ,Restart switch ,HDD LED switch,power switch တို့ ပါ တပ်ဆင်ရာမှာ ပုံးမှာ ပါ တဲ့ ကြိုးလေးတွေအပေါ်မှာ စာ အတိုခေါက် လေးတွေရေးထားပါ တယ် board မှာ လည်း ရေးသားထားပါ တယ် သူနေ ရာ နဲပ သူ တပ် ဆင် ပါ မှားရွင်းစေ ပါ နဲ့ တပ် ဆင် တဲ့ ပုံစံကို board စာ အုပ် မှာ ပြ သ ထားပါ တယ် ကြိုး မှာပါ တဲ့ စာ လေး တွေ ကို ပုံးရဲ့ အောက်ဘက် မှာ ထားတပ် ပါ အဲ့ ဒါ ဆို အပေါင်းအနတ် မမှားတော့ ပါ ဘူး တပ် ဆင် ပြီးသွားရင် ပုံးမှ Power ခလုတ် ကို နိပ်ကြည့် ပါ Processor Fan လည် ရပါ မယ် လည် ရင် Ok ပါ ပြီ မလည် ရင် တော့ Front panel ကကြိုးလေးတွေတစ် ခေါက် ထပ် စစ် ပါ
၆။ HDD ကို board တွင် တပ် ပါ HDD မှာ နစ် မျိုးရှိ ပါတယ် ..တစ် ခုက SATA /
SATA က ခုနောက် ထွက် တဲ့ HDD တွေပါ ကြိုးပြားသေးလေးပါ .. အေ၇ာင် နစ် မျိုးရှိပါတယ် အနှီရယ် အ၀ါရယ် ပါ ... IDE က တော့ ဟိုးအရင် ခု အချိန်ထိသုံးနေ ကြ ဆဲ ပါ Busကြိုးအပြားကြီးတွေပါ ကို ၀ယ် တာ ဘယ် လို HDD ပဲ ဖြစ် ဖြစ် board မှာ အလွယ် တကူ တပ်ဆင် နိင် ပါ တယ်
ရ။ နောက် ဆုံးနေ နဲ့ CD ROM ကို တပ် ဆင် ပါ .. သူ မှာ လည်း(IDE /SATA) နစ်မျိုးရှိ ပါ တယ် HDD လို ပဲ CD Rom ကို တပ် ဆင် ပါData transfer ကောင်းချင် ရင် တော့SATA ဟာအကောင်းဆုံးပါ ပဲ
အကုန် လုံးတပ် ဆင် ပြီး ရင် တော့ ကွန်ပျုတာ တစ် လုံးဆင် လို့ ပြီးဆီးသွားပါ ပြီ..ကျန် တဲ့ အပိုင်းက တော့ Window တင် ဖို့ ပဲ ကျန် ပါ တယ် ... mouse , keyboard ,monitor တော့ ကို့ ဟာကို ပဲ တပ် လိုက် ကြ ပါ တော့ နော် .. Window တင် တဲ့ အပိုင်းကို လည်း အလျင်းသင့် ရင် တင် ပေး ပါ မယ်.. ကိုယ်တိုင် လက် တွေ့ ကို စာ အဖြစ် ပြောင်းရေးရတဲ့ အတွက် အမှားများပါခဲ့ ရင် ခွင့် လွတ် ပေးစေ ချင် ပါ တယ် ..ကုးယူရေးသားထားခြင်းမရှိပါ ကိုယ် တိုင် ရေးသားခြင်းဖြစ် ပါ တယ်.. အကြံပေးချင် တာ ကွန်ပျုတာ ကို မကြောက် ပါ နဲ့ ပျက် ရင် ပျက် ပစေ လုပ်ပြစ် ပါ..တစ် ခါမရ နစ် ခါမရ စိတ်ဓါတ် မကျ ပါ နဲ့ ဖြစ် အောင် လုပ် ရင် ဖြစ်ပါ တယ်